Man United oo go’aamisay qiimaha ay Alexis Sanchez kaga iibineyso Inter Milan – Gool FM
(Manchester) 02 Agoosto 2020. Wargeyska “Express” ee dalka England ayaa soo wariyay in maamulka Manchester United ay dejiyeen qiimaha ay ku fasaxayaan weeraryahankooda Alexis Sanchez.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Chile Alexis Sánchez ayaa xilli ciyaareed amaah ah ugu dhaqaaqay kooxda Inter Milan isagoo ka yimid Manchester United.
Alexis Sánchez ayaa qaab ciyaareed wanaagsan ku soo bandhigay kooxda Inter Milan tan iyo markii laga soo laabtay caabuqa Coronavirus, wuxuu ciyaaray 13 kulan, wuxuuna ku guuleystay inuu dhaliyo 7 gool, halka sidoo kale uu caawiyay 7 gool kale.
Haddaba Wargeyska “Express” ayaa wuxuu tilmaamay in maamulka Inter Milan ay wax ka weydiyeen qiimaha lagu iibin karo Alexis Sánchez, waxayna mas’uuliyiinta Manchester United si dhaqso leh uga jawaabeen Nerazzurri, iyagoo codsaday qiimo dhan 15 million pounds, si ay u fasaxaan laacibka reer Chile.
Waxaa xusid mudan in qandaraaska Alexis Sanchez ee kooxda Manchester United uu dhacayo xagaaga 2022.